Juventus oo kansashay Maalinkii ay u qabatay soo bandhigida Cristiano Ronaldo Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Juventus oo kansashay Maalinkii ay u qabatay soo bandhigida Cristiano Ronaldo Sabab?
(12-7-2018) Kooxda Kubada Cagta Juventus ayaa kanshashay maalinkii ay u qabteen in ay Garoonka Allianz Stadium ku soo bandhigaan Cayaaryahankeeda Cusub ee Cristiano Ronaldo.
Wargeyska Gazzetta dello Sport ayaa daabacay in biiliska Magaalada Torino ay kuwar geliyeen Maamulka sare ee Juventus in aysan suurtagal ahayn in Maalinka isniinta ah ay noqoto Maalinka lasoo bandhigayo Ronaldo isla markaana aysan ahaysan waqti ay ugu diyaar garoobaan sugida amaanka Garaaonka iyo Cayaaryahanka intaba.
Allianz Stadium oo ah Garoonka kooxda Juventus ayaa lafilayaa in kumanaan Taageerayaal ay kaga qayb qaataan soo dhaweynta Ronaldo waxaa kaloo boolisku sheegeen in loo baahanyahay in lasugu amaanka Cayaaryahanka ilaa uu ka soo degayo garoonka Caselle airport sidaa daraadeed dib loo dhigo xiliga loo qabtay oo ahaa maalinka isniinta ah.
Hadaba wararka qaar ayaa sheegaya in Cristiano Ronaldo uu Juventus ugu tegi doono dalka Maraykanka 30 ka bishaan balse lama hubo warkaas in aan loo qaban doonin soo dhaweynta heerka sare ah ee ay doonayaan Mas uuliyiinta Juventus in ay u sameeyaan Ronaldo.